भ्याक्सिन नबन्दै कोरोनाको प्रभाव सकिने वैज्ञानिकको दावी ! – Butwal Sandesh
भ्याक्सिन नबन्दै कोरोनाको प्रभाव सकिने वैज्ञानिकको दावी !
काठमाडौं, १० असार । कोरोना विश्वव्यापी भइरहँदा त्यसका बारेमा सुखद् खबर पनि सार्वजनिक भएका छन् । इटलीका बैज्ञानिकहरुले कोरोनाको खोप नआउँदै कोरोनाको प्रभाव हराएर जाने दावी गरेका छन् । कोरोना सुरु भएको चरण भन्दा अहिले यसको प्रभाव निकै कमजोर भएको दावी इटलिका वैज्ञानिकले गरेका छन् ।
डिसेम्बरको सुरुवाट विश्वव्यापी भएको कोरोनाको त्यती बेलाको प्रभाव निकै कडा भएको र नि*धन हुनेको संख्या पनि बढी भएको बताइएको छ । तर अहिले अस्पतालमा आएका विरामीहरुलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता नभएको तथा त्यसको दर निकै कम भएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकावाट प्रकाशित न्युयोर्क पोष्टमा उल्लेखित समाचार अनुसार सान मार्टिनो अस्पतालमा इन्फेक्सियस डिजिज क्लिनिकका प्रमुखस डाक्टर माटेओ बसेटीले यस्तो दावी गरेका हुन् । उनले सुरुको तुलनामा अहिलेक कोरोना भाइरसको शक्ति कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् । उनले विस्तारै यो भाइरस हराएर जाने पनि दावी गरेका छन् ।
विश्वव्यापी भएको कोरोनाको खोप बनाउन अहिले विश्वभरकै चिकित्सक र वैज्ञानिक लागेका छन् । कुनै मुलुकले पहिलो चरणमा सफलता पाएको पनि उल्लेख गरेका छन् । तर प्रो। माटेओले भने खोप नआउँदै कोरोनाको प्रभाव सकिने दावी गरेका हुन् । इटालीका शीर्ष भायरोलोजिस्ट प्रोफेसर माटेओ बासेती भन्छन्, ‘मार्च र अप्रिलमा जो संक्रमित गम्भीर स्थितीमा अस्पताल आएका थिए, उनीहरुलाई तत्काल अक्सीजनको सपार्ट चाहिएको थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन ।’
अहिले ८०, ९० वर्षका वृद्धवृद्धाहरु पनि कुनै सपोर्ट बिनै सहजै श्वास लिन सकिरहेका छन् र कोरोनालाई जित्न सफल भइरहेका छन् । कोरोना संक्रमित निको हुने दर पनि निकै बढेको उनको दावी छ ।
यो पनि समाचार, कोरोना अपडेटः विश्वभर ४ लाख ८० हजारको निधन
एजेन्सी । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर ४ लाख ८० हजारभन्दा बढी मानिसको निधन भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
संगठनका अनुसार कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको संख्या ९३ लाख ६९ हजार पुगिसकेको छ जसमध्ये करिब ५० लाख मानिस निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । करिब ५८ हजार मानिस अहिले पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट निकै जटिल अवस्थामा छन् ।